33 Pemberai nemufaro imi vakarurama, pamusana pezvakaitwa naJehovha.+ Zvakakodzera kuti vakarurama vamurumbidze. 2 Ongai Jehovha nerudimbwa;Imbai muchimurumbidza* nechiridzwa chine tambo gumi. 3 Muimbirei rwiyo rutsva;+Ridzai tambo zvine unyanzvi, muchishevedzera nemufaro. 4 Nekuti shoko raJehovha rakarurama,+Uye zvese zvaanoita zvakavimbika. 5 Iye anoda kururama uye kutonga zvakarurama.+ Nyika yakazara nerudo rwaJehovha rusingachinji.+ 6 Denga rakaitwa neshoko raJehovha,+Uye zvese zviri mariri zvakavapo* nemweya wemuromo* wake. 7 Anounganidza mvura yemugungwa sedziva;+Anoisa mvura ine mafungu mumatura. 8 Nyika yese ngaitye Jehovha.+ Vagari vese vemunyika ngavamutye. 9 Nekuti akataura, uye zvakavapo;+Akarayira, uye zvakamira zvakasimba.+ 10 Jehovha akavhiringidza mazano emarudzi;+Akaita kuti zvirongwa zvevanhu* zvikundikane.+ 11 Asi mitongo yaJehovha ichamira* nekusingagumi;+Pfungwa dzemwoyo wake dzicharamba dziripo kwezvizvarwa nezvizvarwa. 12 Runofara rudzi runonamata Jehovha saMwari warwo,+Vanhu vaakasarudza kuti vave nhaka yake.+ 13 Jehovha anotarisa ari kudenga;Anoona vanakomana vese vevanhu.+ 14 Anotarisa vagari vepanyikaAri panzvimbo yake yaanogara. 15 Ndiye ari kuumba mwoyo yavo vese;Anoongorora mabasa avo ese.+ 16 Hapana mambo anoponeswa neuto rakakura;+Murume akasimba haaponeswi nesimba rake rakawanda.+ 17 Bhiza rinopa tariro yenhema yekupona;*+Kuva kwaro nesimba guru hakurevi kuti munhu achapukunyuka. 18 Onai! Ziso raJehovha riri pane vaya vanomutya,+Vaya vanomirira rudo rwake rusingachinji, 19 Kuti avanunure* parufuUye kuti avachengetedze vari vapenyu panzara.+ 20 Tiri* kutarisira kuna Jehovha. Ndiye mubatsiri wedu nenhoo yedu.+ 21 Mwoyo yedu inofadzwa naye,Nekuti tinovimba nezita rake dzvene.+ 22 Rudo rwenyu rusingachinji ngaruuye patiri, haiwa Jehovha,+Patiri kuramba takakumirirai.+
^ Kana kuti “mauto azvo ese akavapo.”
^ Kana kuti “nekufema kwemuromo.”
^ Kana kuti “zvinofungwa nevanhu.”
^ Kana kuti “zano raJehovha richamira.”
^ Kana kuti “anunure mweya yavo.”
^ Kana kuti “Mweya wedu uri.”